Nangona kuyi nyaniso ukuba uMongameli we-United States , njengeMlawuli oyiNtloko yomkhosi, unalo igunya elikhethekileyo lokulawula ukusetyenziswa kwezixhobo zenukliya, akakwazi ukwenza oko ngokukubetha intsomi "ebomvu iqhosha. Ngaphambi kokuqalisa ukuhlaselwa, uMongameli we-United States kufuneka asebenze ngokuhambelana nomlinganiselo othile, ulandelelwaniso olunezantsi apha.
Imvelaphi: Kutheni nje uMongameli? Isidingo Sokukhawuleza
I-Flashback eya kwiMfazwe yamaCold.
Ixesha eliqhubekayo elixinzelelekileyo le- atomic diplomacy eligqityiweyo kwiCrisis of Crisis of Missile Crisis laye laqinisekisa ukuba abalawuli bezempi base-United States babenokuthi baqalise ukuyivula-ngaphandle kwesixwayiso-"isiteleka sokuqala" esicwangcise ukukhubaza izixhobo zenukliya zaseMelika.
Ekuphenduleni, i-US ithuthule iteknoloji inokukwazi ukufumana ngokukhawuleza ukuqhuma komkhosi naphina kwihlabathi. Oku kwanika i-US amandla okuqalisa imikhosi yayo esekelwe umhlaba ngokukhawuleza kwinto ethiwa "ukuqaliswa phantsi kokuhlaselwa" kwimoya phambi kokuba ibhujiswe yimikhosi yeSoviet engenayo.
Ukuze uphumelele, le nkqubo yesiteleka yokubuyisela - isasetyenziswa namhlanje - idinga ukuba isigqibo sokuqalisa iimfono ze-US singenzi ngaphezu kwemizuzu engama-10 emva kokuba kuqalwe ukutshalwa kotshaba. Ngokusekelwe kwinqanaba lexesha lokuhamba kweempazamo eziza kutshabalala, yonke isigqibo, umyalelo kunye nenkqubo yokuqalisa kufuneka igqitywe ngaphantsi kwemizuzu engama-30.
Ukuze uhlangabezane nale ngxaki yokukhawuleza yexesha, inkqubo yenzelwe ukushiya oko kuya kuba yinto ebaluleke kakhulu kwaye mhlawumbi isigqibo sokugqibela kwimbali yabantu kumntu oyedwa-uMongameli wase-United States.
Igunya loLawulo lweNyukliya
Yonke imiyalelo yemisebenzi yamajoni yase-US, kuquka i-oda yokusetyenziswa kwezixhobo zenuzi, ikhutshwe phantsi kwegunya leNkqubo yezoKhuseleko ebizwa ngokuba yi-National Command Authority (NCA).
Amagunya anikezelwe yi-NCA ayasebenza ekusebenziseni yonke i-"nuclear nuclear" yase-United States yeebhomu eziqhambileyo, iinqwelo ze-botswana eziphambili zomhlaba (ICBMs), kunye neenqwelo zamanzi ezisetyenziselwa ulwandle (SLBMs).
I-NCA ibandakanywa nguMongameli we-United States, kunye noNobhala wezoKhuseleko. Ngaphantsi kwe-NCA, umongameli unamandla okulawula. I-Ofisi kaNobhala wezoKhuseleko ijongene nokuqhuba iNobhala yezoKhuseleko ngokunikezela ngamasebe empi, uSihlalo weeNtloko zeeNtloko zabasebenzi kunye neMigqaliselo yeZizwe eziManyeneyo. Ukuba umongameli akakwazi ukukhonza, igunya lakhe le-NCA lidluliselwa kwi- Vice-President we-United States okanye umntu olandelayo otyunjwe ngokulandelana komongameli .
Nangona uMongameli we-United States unalo igunya lokubambisana kunye nokulawula ukusetyenziswa kwezixhobo zenukliya nanini na isizathu nangasiphi na isizathu, umthetho othi "umntu ombini" ufuna ukuba uNobhala wezoKhuselo acele ukuba avumelane nomyalelo kaMongameli wokuqalisa. Ukuba uNobhala wezoKhuseleko akavumelani, umongameli unengqiqo yodwa yokutshisa uNobhala. Nangona uNobhala wezoKhuseleko analo igunya lokuvunywa umyalelo wokuqalisa, akakwazi ukuwongamela.
Nangona kunjalo igunya likaMongameli, isigqibo sokusebenzisa izixhobo zenyukliya asenziwe kwiphandle.
Ngaphambi kokuyalela ukuqaliswa, umongameli kulindeleke ukuba aqalise inkomfa yefowuni kunye nabacebisi bezempi nabasemhlabeni jikelele ukuba baxoxe ngeendlela ezikhoyo kunye nezinye iindlela. Ngokubambisana noNobhala wezoKhuseleko, abathathi-nxaxheba abalulekileyo kule nkomfa mhlawumbi baquka iphini likomkhulu we-Pentagon, umphathi we-National Command Command Centre - "igumbi lokulwa" kunye nomlawuli we-US Strategic Command e-Omaha , Nebraska.
Nangona abanye abacebisi bangase bazame ukukholisa umongameli ukuba angasebenzisi izixhobo zenukliya, i-Pentagon kufuneka ekugqibeleni ilandele i-order-chief-order order.
I-'Nyukliya yeBhola 'kunye nexesha lokuqalisa
Ukukhumbula ukuba kuthatha malunga nemizuzu engama-30 ukuba i-ICBM intsha ifikelele kwi-America, izixhobo zenyukliya zikazwelonke zokwakha ingqungquthela zingabonakala zichitha ixesha.
Nangona kunjalo, ingagqitywa ngaphantsi komzuzu omnye. Ngelishwa, umoya okhuselekileyo ukwandisa umngcipheko wesidlo sasemini esekelwe kwisilumkiso sobuxoki.
Ukuba umongameli useNdlu eNtsundu ngelo xesha, umnxeba wenkomfa ubeka kwiCandelo leMeko. Ukuba umongameli uhamba, uya kusebenzisa i-"Nuclear Football" eyaziwayo eneenkcukacha ezikhuselekileyo, ezinikezelweyo zokunxibelelana eziqinisekisa ubungqina bomongameli, kunye ne "bhisikidi," okanye "ibhuku elimnyama" ngokuchonga iikhowudi ezifunekayo ukuze ngokwenene uqalise iimfono. Ibhola liqulethe imenyu elula yokukhethwa kwesikhokelo senyukliya ukuvumela umongameli ukuba atshale ezinye okanye zonke iithagethi zeentshaba. Ibhola liqhutyelwa ngumncedisi ohamba kunye nomongameli nanini xa engekho kwiNdlu eNtshonalanga.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ulwazi oluninzi loluntu malunga neNyukliya yeBhola leNkcukacha luvela kumaphepha e-Cold War declassified. Nangona iinkcukacha ezininzi malunga nebhola lemihla yamandulo zihlala ziyimfihlo, kusekholelwa ukuba iziqulatho zayo zingasetyenziselwa ngumongameli ukuba aqalise "isiteleka sokuqala" ngaphambi kokusungula ukuphendula.
Umyalelo wokuLawula ukhishiwe
Kanye emva kokuba kwenziwe isigqibo sokuqalisa, umongameli ubiza igosa eliphezulu kwigumbi lokulwa kwePentagon. Emva kokuqinisekisa ubungqina bomongameli, igosa lifunda i-fowuni "ikhowudi yomngeni," njenge "Alpha-Echo." Kusuka kwibhasiki, umongameli kufuneka anike igosa lePentagon impendulo eyiyo kwikhowudi yomngeni.
Njengemikhowudi yamandla enyukliya, umngeni kunye neempendulo zempendulo zitshintshwa ubuncinci kanye ngosuku.
Amagosa ekamelweni lokulwa kwePentagon adlulisela imiyalelo yokuqalisa, ebizwa ngokuba yi-Emergency Action Messages (EAMs), kuzo zonke iiMithetho ezine eziManyeneyo eziManyeneyo kunye nakwi-crew nganye. Lo myalezo uqulathe isicwangciso semfazwe esicacisiweyo, ixesha lokuqalisa, ukuqaliswa kweekhowudi zokuqinisekisa, kunye neefowuni zokuqalisa izixhobo kufuneka zivule izixhobo. Yonke le ngcaciso ibhalwe ngekhowudi kwaye ifakwe kwisigidimi sabantu abangaba ngu-150, okanye ixesha elincinane kune-tweet.
Ukuqaliswa kweCrews kwiSenzo
Ngemizuzwana, abasebenzi base-ICBM abasemhlabeni bafumana ii-oda zabo zokusungula i-EAM. Kule ngongoma, akukho mizuzu engaphezu kwemi-3 edlulileyo ekubeni umongameli wafunda ngokutsha ukulwa.
Iqela ngalinye leempazamo ze-ICBM eziqaphileyo, ezilungele ukulungiswa, zilawulwa ziintlanu, amaqela amabini aqalise amaziko aphantsi kwamaziko aphantsi komhlaba ahlukeneyo.
Emva kokufumana imiyalelo yabo ye-EAM, abasebenzi base-ICBM base-land bayakwazi ukuqala iimfono zabo ezingekho ngaphaya kwamasekondi angama-60. Abasebenzi beenqanawa bayakwazi ukuqalisa malunga nemizuzu engama-15, ngokuxhomekeka kwindawo yabo nobunzulu ngexesha.
Ngaphakathi kwinqwelo-moya, umphathi, igosa elilawulayo, kunye nezinye iiofisi kufuneka ziqinisekise umyalelo wokumiselwa. Amanqaku athunyelwe kwiimpawu zelwandle ziqulethe ukudibanisa kwi-ephepheni ekhuselekileyo eneenkcukacha "zokulawula umlilo" ezifunekayo ukuze zikhwephe kwaye ziqalise iimfono.
Amaziko okuqalisa aqale avule ukhuseleko oluqulethe "inkqubo yokuqinisekisiweyo" (SAS) yokuvelisa iikhowudi ezikhutshwe yi-Arhente yoKhuseleko kaZwelonke.
Abadlali baqinisekisa ukuba iikhowudi zokuqaliswa kwe-SAS zidibanisa abo babandakanyeka kumyalelo kaMongameli.
Ukuba iikhowudi ze-SAS zidibanisa, abasebenzisi bokuqalisa basebenzisa ikhompyutheni ukuyivula, ingalo kunye nokucwangcisa iibhokhwe 'ngeenjongo zabo ngokufaka ikhowudi equlethwe ngumyalezo we-SAS.
Ngamanye amaqela okuqalisa amahlanu athatyathele ezimbini iifayile "zokulawula umlilo" kwiindawo zabo zokukhusela. Ngexesha elichanekileyo elisetyenziswe kwisigijimi se-SAS, abadlali abahlanu bajika izihlandlo zabo zombini ukuthumela "amavoti" ezintlanu zokuvota.
Kuphela kufuneka "iivoti" ezimbini zokuqalisa zonke iimfono. Njengesiphumo, nokuba ngaba abathathu beenqwelo-zikhundla zombini abenqaba ukwenza umyalelo, ukuqaliswa kuya kuqhubeka.
Kuphela kwemizuzu emihlanu emva kokuba umongameli anqume ukuwaqalisa, iinqwelo zeMelika ezisekelwe kumhlaba ezinqamlekileyo kunye neemfazwe zenyukliya zihamba ngokubhekiselele kwiinjongo zabo. Kwimizuzu engama-15 yesigqibo, iinqwelo eziza kusetyenziswa ngamanzi-moya ziya kubambisana nazo. Emva kokuba i-missies iqalisiwe ayikwazi ukukhumbula okanye ukujoliswa kwakhona.
Zonke ezinye izixhobo zenyukliya zakwa-US, ezinjengeebhomu eziqhutywe ngeenqwelo zomoya, ukuqhuma iinqwelo, kunye neembalo ezinqamlekileyo kwiindawo eziphantsi kweenqanawa ziya kuthatha ixesha elide ukuba zithunyelwe.
Ukuphefumlelwa emva kwe "Iphupha: Kuphefumlelwe yiNdaba Eyinyani"
Ukwenza izikhalazo ngesiNgesi